Fanafihan-jiolahy tao Andraisoro, olona iray no maty
Jiolahy miisa 5 no nanafika toeram-pivarotana iray teny Andraisoro ny Talata hariva ka nipoapoaka eran'ny tanàna ny basy.
Araka ny fanazavana azo dia tokony ho tany amin'ny 6ora sy sasany hariva tany no nitranga ity fanafihana ity. Vokatr'izany setrasetra nataon'ireto jiolahy ireto izany dia olona 1 no maty voatifitra ary 2 hafa no naratra mafy.
Nandositra ireo jiolahy vao nahare ny fahatongavan'ny mpitondra ny filaminana ka nitifitra izay hitany fa nanelingelina ny lalana ka izany no nahafaty ity lehilahy mpivarotra voanjo ity.
JIOLAHY FANAFIHANA MPIVAROTRA